Sida loo Delete Xiriirada on macruufka in Dufcaddii | Saar Xiriirada ka macruufka
Delete dhammaan dadka ay khuseyso, laakiin darsin ah ama si ku hadhay. Waxaan tan iyo demiyo iCloud go'doomiyo dhibaatada. Laadhuu No. Waxaan xitaa isku dayay tirtiro dhammaan xiriirada aan MBP ka dibna overwriting Xiriirada ku iPad la Lugood. Taasi ma shaqayn midkood.
Dhibaatooyin marka la isku dayayo xiriirada delete on macruufka ? Haddii aad buug iPhone, iPad ama iPod cinwaanka hoose waxaa ka buuxa xiriirada aan waxtar lahayn, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad mar kaxeeyo. Si aad u saaro mid ama dhowr xiriiro, waxaad tagi kartaa Xiriirada app aad iDevice, oo guji mid aad rabto inaad tirtirto. Markaas riix "Edit". Hoos si hoose ee shaashadda oo guji "Delete". Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay 550 xiriirada u baahan in la tirtiro, ma waxaad weli u isticmaali sidan sirgaxan? Too daalin oo wakhti dheer qaata, ma idinla tahay? Taa ka sii daran, dadka isticmaala dad badan u arkaan in ay xitaa ma ka heli kartaa "Edit" hooseysa ka dib markii lagu casriyeeyo macruufka in macruufka 6. Haddii ay taasi dhacdo, maxaad sameyn kartaa?
Si aad u cadeeyo xiriirada on macruufka, sida ugu wanaagsan ee ay tahay in door biday in ay xirfadle macruufka tirtirto codsiga xiriiro . Halkan waa mid kugu habboon. Wondershare TunesGo Retro waxaa si gaar ah loogu talagalay si aad u maareyso wax kasta oo aad iPhone, iPad iyo iPod istareexsan. Iyada oo ay caawimo, waxa aad awoodi kartaa in aad ka saarto xiriirada duwan ee hal mar, taas oo gabi ahaanba aad Fayda of this dhiba xiriirada ka saarida.
Hab fudud in ay tirtirto xiriirada ka macruufka 6
Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigo sida ugu fudud in ay tirtirto xiriirada ka macruufka 6. tallaabooyinka waa isku mid, marka aad qalab macruufka waddaa macruufka 7 ama macruufka 5. Download codsigan iyo hadda nama uu soo raaco.
Tallaabada 1. Run barnaamijkan iyo in ay ku xirmaan qalab macruufka la PC
Bilowga, rakibi barnaamijkan u qaadidda xidhiidh aad kombuutarka. Orod barnaamijkan on desktop computer aad.
Connect aad iPhone, iPad ama iPod aad PC via cable USB ah. Ka dib markii ay ku xiran tahay, barnaamijkan isla markiiba lagu ogaan doonaa qalab macruufka ah. Haddii ay u shaqayso, waxaad ka heli doontaa in xogta ku saabsan qalabka macruufka ku muujisan yihiin geedka buugga bidix.
Tallaabada 2. macruufka 6 xiriirada delete
On column bidix, guji "Xiriirada". Haddii aad saxiixday in qaar ka mid ah xisaab aad iPhone / iPod / iPad, sida iCloud, Yahoo! iyo Exchange, aad arki doonaa xiriirada ku saabsan xisaabaadka ee category Xiriirada. Dooro mid ka mid ah in aad rabto in aad tirtirto xiriirada ka. Markaas, furmo maamulka xiriirka Murayaad saxda ah, doortaan aad xiriir la rabin ama ay doortaan oo dhan markii aad rabtid in aad tirtirto oo dhan xiriirada ka dibna riix "Delete". Markaas, barnaamijka wuxuu biloowdaa inay ka soo saarto xiriiro. Fadlan xusuusnow in aysan barkinta aad iPhone, iPad ama iPod aad PC ka hor habka xiriirada saarista dhamaado.
Fiiro Gaar ah: Dhammaan qalabka macruufka la jaanqaadaan Wondershare TunesGo Retro. Waxay kala yihiin: iPhone 4s / 5c / 4 / 5s / 5 / 3GS, iPod xiriiri 5/4/3, iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad Cusub, iPad 2 iyo iPad.
Hambalyo! Waxaad saaro kuwa xiriir la rabin si guul leh. Hadda, waxaad si deg deg ah ka heli kartaa xiriirada doonayo marka garaacaya qof.
Ka sokow la tirtiro macruufka xiriirada, barnaamijkan kuu ogolaanaysaa inaad ka iPhone, iPad iyo iPod in Outlook wareejiyo xiriiro . Haddii aad leedahay xiriir badan oo nuqul, barnaamijka ayaa sidoo kale kaa caawinaysaa in aad iyaga ku milmaan kooxaha email, magaca iyo lambarka taleefanka.
Raac Videoto ka Delete Xiriirada ka macruufka Devices
Talooyinka la isticmaalayo VLC on Your System macruufka
10 daalacashaduna Fast Web for Mobile (Android iyo macruufka)
> Resource > macruufka > Sida loo Delete Xiriirada on macruufka in Dufcaddii